ASP.Net အတွက် လမ်းညွှန်ပေးပါ — MYSTERY ZILLION
ASP.Net အတွက် လမ်းညွှန်ပေးပါ
October 2008 edited July 2010 in ASP / ASP.NET
ကျွန်တော် ASP.Net အပိုင်းကို စတင်လေ့လာချင်ပါတယ်။
ဘယ်အပိုင်းကို အရင်လေ့လာရမယ်၊ ဘယ်စာအုပ်တွေ၊ E-Books တွေ၊
Site တွေကို စတင်လေ့လာသင့်တယ်ဆိုတာ
ဒါလေးတွေနဲ့တင် တော်တော်ခရီးရောက်တယ်ဗျ။ စာအုပ်တော့ နောက်မှ ရှာပေးမယ်ဗျာနော်။
c# ဖြစ်ဖြစ် vb.net ဖြစ်ဖြစ်တော့ သိထားဖို. လိုပါတယ်။
ဘာလို.လဲဆိုတော့ asp.net ရဲ့ server-side မှာ ရေးဖို. အဲဒါတွေလိုအပ်လို.ပါ။
Htoonlin wrote: »
asp.net based free ရတဲ့ forum (သို့) shopping card component တွေရှိလာ သိချင်လိုပါ။ PHP မှာ ဆိုရင် phpbb က free ရတယ်လေ။ အလိုမျိုး asp.net free ပေးတဲ့ forum မျိုးကို သိရင်ပြောကြ ပါအုံး။ ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။ :6:
asp.net မှာလေ့လာကြည့်ပါ။ dotnetnuke ဆိုတာ joomla လိုမျိုးဘဲဗျ။ နောက် အလကားရတဲံ ဟာတွေလဲရှိတယ် www.asp.net မှာလေ့လာလိုက်။ရှိတယ်ဗျ။
ကျေးဇူးပါပဲ ကိုဒီဘီ။ မနက်ဖြန်မှ ဆုံကြတာပေါ့။
Haveanice weekend! :36:
အင်း Ajax ကို http://www.w3schools.com/Ajax/Default.Asp အဲဒီမှာ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။
asp.net နဲ. ပတ်သတ်လို. အကူအညီ လိုရင်ပြောပါ ။ ကူညီနိုင်သလောက် ကူ ညီပေးပါမယ့်။
သိပ်တော့လည်းမ ကျွမ်း ကျင်ဘူး။
ဒါပေမယ့် နည်းနည်း ပါးပါးတော့ သိတယ်:2::2:
.net အတွက် Free Theme တွေဘယ်ဆိုက် ကနေ ယူရမလ ဲ...........
.NET အတွက် free theme က မကြားဖူးပါဘူး။ HTML free template တွေတော့ google ကနေ ရှာလိုက်ရင်ရတယ်။ Design ကိုတော့ HTML + CSS ကိုပဲ .NET နဲ့ တွဲရတာပဲ။
ဟုတ်လာ .... မရှိဘူလား .... ရှိတယ်အောင်မေ့လို Wordpress Theme လိုမျိုး ............. ကျေးဇူး ကိုစေတန်
ASP.NET က C# သို့မဟုတ် VB.NET နဲ့ ရေးရတဲ့ programming language ပါ။ Wordpress ကတော့ PHP သုံးပြီးရေးထားတဲ့ CMS ပါ။ ASP.NET အတွက် HTML + CSS ကို သုံးပြီး website တွေ တည်ဆောက်ရပါတယ်။ CMS ကတော့ အရန်သင့်သုံးအတွက်ရေးဆွဲထားတာပါ။ မတူပါဘူး။
php မှာ template တွေပိုများပါတယ်.. WP မှာ တို့လိုပေ့ါ.. ဒါ့ကြောင့် PHP website တွေတော်တော်များများရဲ့ design တွေဆိုအတော်လေးကြည့်လို့ကောင်းတယ်
ASP.NET မှာတော့အဲလို template တွေသုံးတာရှားတယ်။
ASP.NET/Any Languages ကိုလေ့လာသူတယောက်အနေနဲ့ အပိုင်း ၅ ပိုင်းရှိလိမ့်မယ်..
၂) နောက်ဆုံး Products တွေရဲ့ News ကို Follow လုပ်မယ်
၃) Forum တွေမှာ ဆွေးနွေးမယ်၊ လေ့လာမယ်
၄) Sample Project တွေ Download လုပ်ပီးစမ်းမယ်
၅) စာမေးပွဲဖြေမယ် (ထိရောက်မူရှိပါတယ်၊၊ Brain Dump တွေပဲကြည့်မသွားဘူးဆိုရင်ပေ့ါ)
၁) Amazon ကအများဆုံးမဲပေးထားတဲ့ စာအုပ်ကို SG Library ကနေငှားဖတ်လို့ရတယ်၊ နာမည်က ASP.NET Unleashed ပါ.. ASP.NET4အတွက်တော့မရသေးဘူး
၂) http://www.4guysfromrolla.com/ နှင့် http://weblogs.asp.net/scottgu/ (Blog ofaguy from Miscrosoft)
လက်လမ်းမှီသလောက် ASP.NET programmers တွေအသွားများတဲ့ Website တွေပါ... အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်...
nay ko htet
စျေးခိူခိူနဲ့ ဆရာကောင်းတွေ ရှိတယ်
technology ကို detail သိသွားတာပေါ့